လေးစားရပါသောလူကြီးမင်းများ! ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားကမ်းလှမ်း Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့၏နည်းပညာ, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
ဆေးကြောစက်အပြီးတွင် tank ကိုဆေးကြောရန်အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်.
အထူးလျှံလန်းလန်းလန်း့့့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့့့့ရေ့့့့့့့့ရေ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ Dgs ့့့မှု့.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/high-temperature-over-flow-rapid-dyeing-machine-5.html
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 မျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့် ဆိုးဆေးအိမ်ကိုအမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိရန်နှင့်ရေနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပါ.